Markdown Optimization: Maitiro Ekuwedzeredza Revenue neMutengo Wakatarwa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Data Processing, Dhata Sayenzi, Kufanotaura Ongororo, chitoro, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Markdown Optimization: Maitiro Ekuwedzeredza Revenue nePaccision Pricing
Vatengesi vanowanzo sangana nematambudziko mukugadzirisa mitengo yavo mwaka dzakasiyana. Mumwaka wepamusoro, ivo vanofanirwa kuona mutengo wekuvhura uye zvekushambadzira zvinopihwa. Ipo vachiri mumwaka wekusiya-mwaka ivo vanofanirwa kudzikisa mitengo yavo kuti vaone kuti masheya abviswa pamberi pechiitiko chisati chaenda - izvi zvinozivikanwa sekumaka. Muchiitiko kana paine kudiwa kwekukurumidza kudzikisa mitengo, mabhizimusi ekutengesa anotarisana nemibvunzo mitatu inowanzoitika:
Mari yakawanda sei yandinofanira kudzikisa?
Ndicharamba ndichiwana purofiti yakakwana here?
Ndeipi nguva chaiyo yekudzikisa mitengo?
Zvese izvi zvinonetsa ndezvechokwadi sezvo zvichikanganisa yako purofiti uye chiratidzo chiratidzo. Kugadzirisa iyi nyaya mabhizinesi anodzidzira maratidziro ekudzikisa mitengo yavo kusvika padanho repamusoro. Kugadziriswa kweMarkdown ndiyo nzira iyo misiyano yakasiyana inokonzeresa kudiwa senge maitiro evatengi, mitengo, maitiro emusika, nhoroondo yekutenga nezvimwe zvinoongororwa kuti uuye pamutengo unogona kukurudzira kudiwa uye panguva imwe chete kuve nechokwadi chekukwanisa kuita purofiti.
Read More: Maitiro Ekuvandudza Muchinjiko-kutengesa Nekufanofungidzira Kwevatengi Kutenga
Basa reData hombe muMarkdown Optimization:
Nhasi vatengesi vanobata nemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa uye mitengo yezvinhu zvese izvi inogona kusiana pane dzakawanda nzira senge nhare, webhusaiti uye chitoro chemuviri. Makuru e-commerce mahombekombe seAmazon anosvika kumamirioni mazana mana nemasere emagetsi (mabviro) uye ivo vanofanirwa kukwidziridza mitengo kune yega yega. Kunyangwe iwe ungave usina idzi nhamba dzakawanda dzezvinhu mune yako bhizimisi iwe uchazoda kukwirisa mitengo yezvinhu zvakawanda zvinoenderana nemwaka uye maitiro. Big data maturusi ekuongorora anogona kuongorora mafambiro emusika uchishandisa evanhu vezvenhau manzwiro ongororo uye psychology yemutengi wako uchishandisa mapimendi kubva kunzvimbo dzakaita sePOS masisitimu, kutengeserana kwepamhepo uye nharembozha kuti uuye nemitengo inozokonzera kuwedzera kwekuda uye kukubatsira kuti uwane mihoro yakawanda. Vanoongorora data vanogona kupa huremu kukosha kune zvese zvinhu zvakaita semitengo, maitiro, maitiro analytics etc. kufanotaura maitiro evatengi nekuda kwekuchinja kwemutengo.
Read More: 5 Zvisinganzwisisike Zvishandiso zveBig Data muRetail
Iyo Big data nzira yeMarkdown Optimization:
We at NewGenApps, tevera maitiro akaratidzirwa ekukubatsira iwe kuwana nzira yekuongorora kumatengo. Maitiro ekumakisa optimization anoitwa mumatanho matatu makuru:
1.Kuongorora Kunodzokororazve: Mukuita uku, nhoroondo yekutenga kwevatengi, pamwe nemutengesi enhoroondo emashiti emashizha, inoongororwa. Kutengesa uye purofiti michero yakarongedzwa zvichienderana nekutenga mapoka uye zvigadzirwa zvigadzirwa.
2. Statistical Kuongorora: Mutengo wekusimba kwezvinhu zvakasiyana siyana kunoverengerwa uchishandisa yakashata data data. Musiyano ongororo inoshandiswa kunzwisisa mutsauko pakati pekuita uye fungidziro.
3. Kugadzirisa: Mune ino nhanho, isu tinoisa ongororo pamwechete kuti tisvike kumatengo emitengo anovimbisa yakawanda purofiti pamwe nechitoro clearance.
Read More: 5 Makomborero Ekutora Cloud Komputa muRetail
5 Bhenefiti yekushandisa Markdown Optimization:
Nekushandisa big data ongororo yekuita markdown optimization mabhizinesi anogona kubatsirwa nenzira dzakati wandei. Hedzino nzira shoma idzo markdown inogona kubatsira yako bhizimisi:
1. Zvakakwana dhisikaundi:
Kugadziriswa kweMarkdown kunogona kukubatsira iwe kupa zvakakwana zvitadzo kune vatengi vako nekuongorora mapinduriro avanopa kupihwa. Iwe unozonyatsoziva nguva yekutangisa kupa madhora uye nguva yekuwedzera iyo muzana (kana zvichidikanwa).
2. Kuvandudza Yako Musika Nguva:
Kuderedza mutengo pachawo hakuna kukwana. Iwe unodawo kuziva nguva yekudzikisa mutengo uye nguva yekutaurirana shanduko. Markdown optimization inovimbisa kuti iwe unokwanisa kunyatso nguva imwe neimwe yemutengo wako wekudzikisa.
3. Omni-chiteshi Management:
Vatengesi vanofanirwa kubata mitengo yavo mumatanho akawanda. Kunyangwe iwe uchida kuenderana kana kuti unofarira kuchengetedza musiyano, kuongororwa kwedata kunogona kukubatsira kuona mutengo wakakwana wezvese zvako. bhizimisi channels.
4. Kuwedzera Mari:
Kugadziriswa kweMarkdown kunogona kukubatsira kuti uwedzere mari yako nekubatsira iwe kuti uwane iwo akanakisa emapoinzi emitengo. Maitiro aya anovimbisa kuti iwe uchengetedze huwandu hunogona kuitika purofiti uye kujekesa masheya ako echinhu chero chekare.
5. Inventory Kudzora:
Mashoko echinyakare haangogumise muhomwe yakavharidzirwa asiwo yakavharirwa nzvimbo. Iyo nzvimbo yaigona kuve yakapihwa kune zvimwe zvinobatsira zvinhu. Nekushandisa kumakisheni ekugadzirisa iwe unogona kuramba uchitarisa pane ako zvinyorwa uye kudzivirira kuunganidza.
Nekudaro, isu taona kuti markdown optimization inogona kukubatsira iwe kusvika pamhando dzemitengo uyezve kuwedzera mihoro yako zvakanyanya. Iyo inogonesa data inotsigirwa kuita sarudzo pamwe nekuongorora mutengi psychology yekufungidzira zvinodiwa uye maitiro. Kana uri kutsvaga bhizimisi vaongorori vanogona kukubatsira kutora mukana weiyi nzira iwe uri panzvimbo chaiyo. At NewGenApps isu dzidzira mu kuongorora kwebhizinesi uye inogona kukubatsira kuti uwane nzvimbo dzakakwirira nematekinoroji emazuva ano senge musika tswanda ongororo, chiratidzo chekumisikidza etc. Sununguka kutaura nesu kune chero rubatsiro kana zano.
6 Maitiro Ekukwikwidza Neiyo Giants uye Kuhwina Mutambo Wekutengesa
Sep 14 | eCommerce, chitoro